विदेशी सेनामा ४४ हजार नेपाली « Naya Page
विदेशी सेनामा ४४ हजार नेपाली
प्रकाशित मिति : December 21, 2017
नेपालबाट दुई सय वर्षदेखि बेलायत तथा ६७ वर्षदेखि भारतीय सेनामा हरेक वर्ष नेपाली भर्ती भइरहेका छन् । विदेशी सेनामा करिब ४४ हजार नेपाली कार्यरत छन् । हाल बेलायती सेनाको ब्रिगेड अफ गोरखाजअन्तर्गत तीन हजार ६ सय र सिंगापुर पुलिसमा करिब चार सय नेपाली छन् । भारतीय सेनाका ६ रेजिमेन्ट र अर्धसैनिक बल आसाम राइफल्समा करिब ४० हजार नेपाली कार्यरत छन् । बेलायत र भारतको सेनामा रहेका नेपालीले दुई दर्जनभन्दा बढी युद्ध लडेका छन् ।
सन् २०२० सम्म ब्रिटिस सेनाको कुल संख्या ८५ हजार पुर्याउने सरकारी योजनाअनुसार गोरखाहरूको पनि संख्या थप कटौती हुने सम्भावना छ । बेलायतले वार्षिक ६० जना नेपालीलाई आफै छनोट गरेर गोरखा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्समा पठाइरहेको छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले भने ३० असार ०६६ मा नेपाली युवाको सिंगापुर पुलिसमा भर्ती अवैधानिक रहेको फैसला गरेको छ । तर, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । भारतीय सुरक्षाविद्हरूले एक वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार भारतीय गोरखा रेजिमेन्ट तथा आसाम राइफलमा रहेकामध्ये ७० प्रतिशत नेपाली नागरिक छन् । भारतीय सेनामा हरेक वर्ष नेपाली भर्ती हुने गरेका छन् ।
भारतीय सेनाको गोरखा पहिलो, तेस्रो, चौथो, पा“चौ“, आठौ“, नवौ“ र ११औ“ राइफल्समा नेपाली कार्यरत छन् । यसबाहेक आसाम राइफल्सलगायतका अर्धसैनिक बलमा पनि करिब २० हजार गोरखा सैनिक कार्यरत छन् । यी सबैमा पा“चदेखि ६ वटा बटालियन छन् । भारतले नेपालीलाई भारतीय सेनासरह सबै सेवा–सुविधा दिएको छ ।
भारतीय तथ्यांकअनुसार ८० हजार पूर्वसैनिक, १७ हजार अवकाशप्राप्त आसाम राइफल्सका सैनिक र ११ हजार सैनिकका विधवाले नेपालमा पेन्सन बुझिरहेका छन् । उनीहरू सबैका लागि १२ सय करोड भारतीय रुपैया“ वार्षिक खर्च गरिरहेको भारतको तथ्यांक छ ।
हाल बेलायती सेनामा ब्रिगेड अफ गोरखाजअन्तर्गत रोयल गोरखा राइफल्स, क्विन्स गोरखा सिग्नल्स, क्विन्स ओन गोरखा लजिस्टक रेजिमेन्ट छन् । पछिल्लोपटक बेलायतका तर्फबाट अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सैनिकस“गको समन्वयमा गोरखालाई अफगानिस्तानमा खटाइएको थियो । सन् १९४९ देखि सिंगापुर पुलिस फोर्समा गोरखा कन्टिन्जेन्ट खडा गरिएको छ । सिख युनिटलाई विस्थापन गरी गोरखा राखिएको यो फोर्स सिंगापुर पुलिसको महत्वपूर्ण अंग हो । अहिले गोरखालाई सडक पेट्रोलियम, सिंगापुर एयरसोका अतिरिक्त सुरक्षाका लागि पनि खटाइएको छ ।
हाल पोखरास्थित भर्ती केन्द्रमा गोरखा सैनिकको अन्तिम छनोट हुने गरेको छ । त्यसपछि ब्रिगेड अफ गोरखाजको ललितपुर मानभवनस्थित कार्यालयले उनीहरूलाई बेलायत जाने व्यवस्था मिलाउने गरेको छ ।
ब्रुनाई गोरखा रिजर्भ युनिट, बु्रनाईका सुल्तानको स्पेसल गार्ड फोर्सका रूपमा गोरखा कार्यरत छन् । हाल सिंगापुर र ब्रिटिस सेनाबाट अवकाश पाएका करिब चार सयको हाराहारीमा गोरखा कार्यरत छन् ।
यसरी सुरु भयो गोरखा भर्ती
सन् १८१४–१६ मा ब्रिटिससँग भएको युद्धका क्रममा बन्दी बनाइएका तीन हजार नेपाली सैनिकलाई समेटेर सुरुमा सिरमुर बटालियन खडा गरियो । त्यसपछि नासिर बटालियन र मलाउ“ रेजिमेन्ट खडा गरिएको थियो । त्यसयता बेलायती सेनामा मात्रै करिब पा“च लाख नेपाली भर्ती भइसकेको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले बताए । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हु“दा ब्रिटिस गोरखा सैनिकका दशवटा रेजिमेन्ट थिए । तीमध्ये बेलायतले भारत छाड्दा चारवटा लिएर गएको थियो भने बा“की भारतलाई नै जिम्मा लगाएको थियो । सन् १९४७ नोभेम्बर ७ मा भारत र ब्रिटिसबीच भएको सम्झौताअनुसार १० रेजिमेन्टमध्ये दोस्रो, छैटौ“, सातौ“ र दशौ“ रेजिमेन्ट बेलायत लगिएको थियो ।
गोरखा भर्तीबारे नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा बेलायतका तर्फबाट एसिबी साइमन, भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल कनवार दयासिंह बेदी र नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरकर्ता बेलायतीको हैसियत त्यतिबेला खुलाइएको थिएन । उनी साधारण अधिकृत मात्रै थिए । हस्ताक्षरकर्ताको प्रोटोकल मिलेको छैन भने सम्झौतालाई तीनै मुलुकको संसद्ले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेका छैनन् ।
कहाँ कहाँ युद्ध लडे नेपालीले ?
बेलायत र भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपाली दुई दर्जनभन्दा बढी लडाइ“मा सहभागी भएका छन् । भारतीय गोरखाका तर्फबाट नेपालीले सन् १९६२ मा चीनस“ग लडेका थिए । पाकिस्तानस“ग १९६५ मा र बंगलादेश स्वतन्त्रताका वेला सन् १९७१ मा र १९९९ मा कार्गिलमा युद्ध लडेका छन् । श्रीलंकाको लिट्टे अपरेसनमा सन् १९८७ मा पनि नेपालीले युद्ध लडेका थिए । गोरखा सैनिक १९४८ मा हैदरावाद प्रहरी कारबाही, १९९९ मा कार्गिल लडाइमा योगदान पुयाएको भन्दै भारतको प्रसिद्ध परम वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्रजस्ता सम्मानबाट पनि विभूषित छन् ।
बेलायतका तर्फबाट नेपाली युवाले एक दर्जनभन्दा बढी युद्धमा सहभागिता जनाएका छन् । सन् १८८९ मा इजिप्ट, सन् १८९० मा रसिया र मध्य एसियामा नेपालीले लडेका थिए । दुईवटा विश्वयुद्धमा सहभागिता जनाएका गोरखालीले इरान, इराक, कोसोभो, सियरालियोन, ग्रिस, इटली, जापान, जर्मनी, ककेससमा बेलायतका पक्षमा लडेका थिए । मलेसियाको गुरिल्ला वार, सिंगापुर, इन्डोनेसिया र मलेसियाको सीमा विवाद, ब्रुनाई विद्रोह र अर्जेन्टिनाको फकल्यान्डमा पनि गोरखालीले बेलायतका तर्फबाट युद्ध लडेका थिए । बेलायतले १२ जना गोरखालाई भिक्टोरिया क्रसको सम्मान दिए पनि पेन्सन र अन्य सुविधा नपाएरै उनीहरूमध्ये धेरैको मृत्यु भइसकेको छ ।
गोरखा भर्तीबारे प्रश्न
गणतन्त्र स्थापनापछि संसद्मा पटक–पटक विदेशी सेनामा भर्ती रोक्न विषय उठे पनि पहल भएको छैन । संसद् र सरकारले बेलायती सेनासरह तलब–सुविधा दिन बेलायत सरकारलाई आग्रह गरे पनि भर्ती रोक्नेबारे कुनै पहल गरेको छैन । गेसोले २५ वैशाख ०७१ मा बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई बुझाएको पत्रमा गोरखा भर्तीको औचित्यबारे प्रश्न उठाइएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल कहिल्यै पनि बेलायतको उपनिवेश नभएको’ र रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका न्यायाधीश निकोला ब्ल्याकको इजलासले गोरखा भर्ती गैरकानुनी ठहर गरिसकेको अवस्थामा भर्तीको औचित्यबारे प्रश्न उठाएको थियो ।
‘दुई सय वर्षसम्म कुन कानुनका आधारमा गोरखा भर्ती भयो, किन नेपालीले अनाहकमा उसका पक्षमा लड्नुप¥यो, नेपाल राष्ट्रलाई र गोरखा सैनिकलाई के फाइदा भयो ?’ गेसोका अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘हामीले बारम्बार प्रश्न सोधिरहेका छौ“ । यसको जवाफ खोजेर गोरखा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ ।’ बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले भने १४ असोज ०६५ मा गोरखा भर्ती अवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो । सन् २००९ अप्रिल २९ मा गोरखालाई बेलायतीसरह समान अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा त्यहा“को संसद्मा बहुमत जुटेपछि गोरखाले समान तलब पाउ“दै आएका छन् ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)को नेतृत्वमा बेलायती सेनासरह गोरखालाई पनि समान सुविधा दिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन भएपछि नेपाल सरकार र संसद्ले चासो राख्दै आएको छ । संसद्को परराष्ट्र तथा मानवअधिकार समितिले ०५३ मा बेलायतमै गएर गोरखालाई पनि बेलायतीसरह पेन्सन दिन आग्रह गरेको थियो । सरकारले पनि समान सुविधाका लागि कूटनीतिक पहल गरेको थियो । ‘समितिको बहुमतले समान पेन्सनका पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेको थियो, र बेलायत जा“दा हामीले सरकारलाई नै त्यो प्रस्ताव बुझाएका थियौ“,’ संसदीय समितिका तत्कालीन सभापति हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने, ‘गेसोको आन्दोलन र हामीले समेत गरेको पहलपछि पेन्सन वृद्धि भयो ।’ तर, संसद्ले यसको सान्दर्भिकताबारे प्रश्न नउठाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टी जन्मेदेखि नै गोरखा भर्तीको विरोध गर्दै आयो, तर पाचजना कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री भए, गोरखा भर्ती बन्द गर्ने केही पहल गरेनन्,’ श्रेष्ठले भने ।
०६८ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले गोरखालाई समान सुविधा दिन बेलायती समकक्षीलाई पत्र लेखेकी थिइन् । त्यसबाहेक नेपालले यसबारे सार्थक पहल गर्न नसकेको परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले बताए । ०६८ मा तत्कालीन समितिले तयार गरेको नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी मस्यौदामा रोजगारीको उचित प्रबन्ध मिलाएर गोरखा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिका तत्कालीन सभापति पदमलाल विश्वकर्माले नेपाली भूमिमा नेपालीलाई अर्को देशका लागि शपथ खुवाएर भर्ती गर्नु जायज नहुने टिप्पणी गरे । ‘गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, नेपालले गोरखा सैनिकमाथि परेको विभेद सुल्झाउ“दै अन्ततः भर्ती बन्द गर्नेतिर कदम चाल्नुपर्छ,’ विश्वकर्माले भने । हालै गठित संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहले गोरखा भर्तीबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने र मुलुकका पक्षमा पहल गर्ने बताए । ‘हामी छलफल गर्छौ“, जे गर्दा मुलुकको हित हुन्छ, त्यही गर्छौ“,’ साहले भने ।
-गोर्खा सैनिक आवाजबाट
गोर्खाली : नाममा के छ ?
पूर्वगोर्खा सैनिकलाई दुर्लभ अवसर : बेलायती महारानीको प्रतिनिधिमा नियुक्त
बेलायतमा कोरोनाको प्रकोप बढेसँगै २ लाख नेपाली त्रासमा, भूतपूर्व गोरखाहरु पनि समस्यामा
सर्वोच्चले भन्यो : मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना नलिनु, सडकमा नउभ्याउनू
काठमाडौं, ४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने र
नाष्टले तयार गरेको अक्सिजन सिलिण्डरको सफल परीक्षण
काठमाडौं, ४ जेठ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले नेपालमा पहिलो पटक तयार
भारतले अक्टोबरसम्म खोप निर्यात नगर्ने, नेपालको खोप अभियान प्रभावित हुने
काठमाडौं, ४ जेठ । भारतले अक्टोबरसम्म कोभिड–१९ विरुद्धको खोप निर्यात गर्ने सम्भावना नरहेको सरकारी स्रोतहरुलाई
प्रधानमन्त्री र सात मन्त्रीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ आज
नेपालमा पनि देखिन थाल्यो चक्रवातकोे प्रभाव, यी काम नगर्न चेतावनी
जसपाको उपेन्द्र–बाबुरामले बोलाए आफू निकटको बैठक, ठाकुर पक्षलाई कारवाहीको तयारी
देशका ७३ जिल्लामा निषेधाज्ञा
२०७८ बैसाख ३१ गते शुक्रबारको तपाईको राशिफल